Meksika: Vondrona Mitady Olom-pirenena Tsy Miankina Hirotsaka Hofidiana Ao Amin’ny Kongresy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Febroary 2012 9:39 GMT
Ankehitriny, ao Meksika, mila miditra amin'ny antoko politika ianao vao afaka mirotsaka hofidiana ao amin'ny Kongresy. Nentina nandresen-dahatra hatrany fa manome vahana ny kilasy politika mitady ny tombotsoan'ny antokony manokana amin'ny fanaovana ampihimamba ny fahefana izany rafitra izany. Volana vitsivitsy lasa izay, vondrona olom-pirenena no nanosika ny fanovana mafonja amin'ny demokrasia Meksikana, iray amin'izany ny Fanitsiana Ara-politika izay ahitana, toy ny mety amerenana indray ny fifidianana.
Saingy hatramin'izay tsy nahazoan’ ireny fanovana ireny fankatoavana mihitsy, sy ny fijerana fa taonan'ny fifidianana filoham-pirenena izao, nanetsika ny #ReformaPolíticaYA (“Fanovana Politika IZAO”) ny vondrona ka nitarika karazana fanovana teo amin'ny Lalàna Federalin'ny Andrimpanjakana sy ny Fikarakarana ny Fifidianana (Code fédéral des institutions et procédures électorales) (Cofipe) mba ahafahan'ireo olom-pirenena tsy miankina mirotsaka hofidiana.
Toy izao ny fandehan'izany rafitra izany: misoratra anarana ao amin'ny tranokala democracia.mx ny olom-pirenena ka hodinihan'ny vondrona ny momba momba azy ireo mba hijerena raha mahafeno ny fepetra rehetra ilaina, araka ny nambaran'i Juan Pablo EMT (@JuanPabloEMT) tao amin'ny Twitcam, hoe:
Tsy liana amin'antoko, fa olom-pirenena mahaleotena sy manana hevi-baovao
Mikasa hanolotra fanohanana ara-dalàna ho an'izay olom-pirenena voafidy amin'ny birao-pifidianana be olona indrindra ny vondrona tanora tompon-kevitra tamin'izany, ary hanome azy ireo ny fitaovana ilaina amin'ny dingana manaraka hotontosainy.
Olom-pirenena mampiseho ny soso-kevitr'izy ireo tao amin'ny antenimieran-doholona Meksikana. Sary avy amin'ny mpisera yfrog @YONOFUI
Hosoratana anarana any amin'ny sampan'ny Federal Electoral Institute (Ivotoerana Federaly momba ny Fifidianana) (IFE) isan-toerana ny kandidà tsy miankina voafantina, holavin'ny IFE ny fisoratana ny anaran'izy ireo, fa hanatona ny mpitsara ny vondrona tanora hitsipaka ny fanapahan-kevitra. Manantena ny tanora fa havelan'ny mpitsara hiseho ao amin'ny biletam-pifidianana amin'ny volana Jolay ny anaran'ireo olom-pirenena kandidà tsy miankina.
Mitaratra ny fikarohan-kevitry ny tanora mahatsapa tena ho tsy voasolo tena ity hevitra ity.
José Manuel Azpiroz (@jmazpiroz) [es], Talem-paritry ny Fanofanana momba ny Mpitarika ao amin'ny Fikambanana Ethos, nanambara ny teboka lehibe indrindra tamin'ireo hevitra niposaka:
Manao ahoana raha alaintsika indray ny Kongresy Meksikana? Eny, ilay nalain'ireo antoko politika ankeriny. #300vacantes (#300sezabanga) #occupySanLazaro
Paul Moch (@p_moch), anisan'ny mpikambana ao amin'ny vondrona nilaza hoe:
Tsy leo ny fanararaotana ataon'ireo olona milaza fa solontenantsika ao amin'ny Kongresy ve ianareo? Raha eny ny valinteninao… Misy (seza banga) #300sezabanga ao!
YONOFUI (@YONOFUI), iray amin'ireo mpikambana mavitrika amin'ny hetsika, manantena fa misy zava-miova amin'ny fomba heverin'ny maro amin'izany:
Tiako kokoa ny mahita ireo Meksikana tapa-kevitra handray ny fitantanana fa tsy miandry ny governemanta hamaha ny olana.
Tsy mbola fantatra izay ho fandehan-javatra ary tsy misy ny antoka fa hiseho ao amin'ny vato-pifidianana ny anaran'ireo olom-pirenena natolotry ny vondrona. Na dia izany aza, vahaolana farany izany (taoriana ny fiezahana hahazo mpanohana tao amin'ny Kongresy ny amin'ny tokony hanoratana ny Fanitsiana Politika), feno fanantenana, mba hanovana ny rafitra izay mbola hita fa manjaka ankehitriny : ireo izay ao anatin'ny antoko politika ihany no afaka fidiana amin'ny fe-potoam-piasana amin'ny asam-panjakana ambony.